XOG: Maxaa looga Hadlay kulanka Qarsoodiga ahaa ee C/raxmaan C/shakuur & Saraakiil ka socda Imaaraadka…. – warqaat.com Information About Somali New's Today
HomeWARARKA MAANTAXOG: Maxaa looga Hadlay kulanka Qarsoodiga ahaa ee C/raxmaan C/shakuur & Saraakiil ka socda Imaaraadka….
XOG: Maxaa looga Hadlay kulanka Qarsoodiga ahaa ee C/raxmaan C/shakuur & Saraakiil ka socda Imaaraadka….
Xogta ayaa sheegeysa in Siyaasiga Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur uu magaalada Muqdisho kula kulmay wafdi ka socda dowlada Imaaraadka Carabta.
Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur iyo masuuiyiintan ayaa ka wada hadlay arimo ku saabsan weeraradii ugu dambeeyay ee ciidamada dowlada Soomaaliya kusoo qaadeen gurigiisa iyo masuuliyiinta ka tirsan xisbigiisa.
Kulankan oo qarsoodi ahaa ayaa la sheegay in sidoo kale lagu soo hadal qaaday mooshinka Madaxweynaha Soomaaliya ay ka abaabulayaan xildhibaanada mucaaradka ku ah dowlada Federaalka Soomaaliya.
Warar qaar ayaa sheegaya in Saraakiishan ka socda dowlada Imaaraadka ay lacag aad u badan ku wareejiyeen Siyaasiga Cabdi raxmaan Cabdi Shakuur, walow aan la ogaan inta ay la eg tahay.
Si kastaba ha ahaatee dowlada Imaaraadka ayaa maalgalisa siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowlada Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo aan si weyn ula dhacsaneyn siyaaasiga Imaaraadka iyo xulafadiisa.
Madaxweyne Farmaajo oo loogu baaqay inuusan Dabaaldeg u sameyn Sanadguurada Doorashadiisa [Akhriso]
Maxaa looga hadlayaa Shirka Muqdisho uga furmaya Dowladda Federaalka & Maamul Goboleedyada?
44,866 total views, 1,816 views today
44,866 total views, 1,816 views today War ka soo baxay Hay’ada Nabadsugida iyo Sirdoonka Qarank ayaa waxaa lagu sheegay in Ciidamada Amniga ay Gacanta ku dhigeen Maxkaxdii ka dambeeyasay weerarkii dadka badan ku dhinteen ee lagu qaaday […]
44,937 total views, 1,815 views today
44,937 total views, 1,815 views today Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta qabatay munaasabad lagu daahfurayay Barnaamijka Carabiyaynta Dastuurka KMG ah oo ay ka soo qeybgaleen Wasiir Ku-Xigeenka Arrimaha Dastuurka iyo Safiirka […]
44,950 total views, 1,814 views today
44,950 total views, 1,814 views today Wareegto ka soo baxay Xafiiska Madaxweynaha Dowlad-goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam(Madoobe) ayaa Maanta oo Khamiis ah waxaa lagu Magacaabay Hanti dhowraha guud ee Jubbaland Wareegtada ayaa waxaa Hanti dhowrahaGuud ee Jubbaland […]
44,972 total views, 1,814 views today
44,972 total views, 1,814 views today Kulan socday in ka badan sideed saacadood ayaa waxa uu Turkiga ku dhexmaray Mas’uuliyiin uu horkacayay Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Soomaaliya Maaxamed Cabdullaahi Salaad(Omaar) iyo Mas’uuliyiinta Shirkadda Favori ee Maamusha Garoonka […]
45,007 total views, 1,816 views today
45,007 total views, 1,816 views today Taliye ku xigeenka Ciidamada Booliska Dowlad Goboleedka Galmudug Col, Cabdi Jaamac Cabdulle ayaa shaaciyay in kadib baaritaano ay sameeyeen ay heleen halkii laga soo abaabulay weerarkii lagu qaaday Xarun uu Gaalkacyo […]